> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MSWMM faylasha la MSWMM Converter
Tan iyo files mashruuca MSWMM abuuray by Windows Movie Kan sameeyey ma loo isticmaali karaa in wax codsiyada kale, dadka arrimuhu si loogu badalo files MSWMM si kala duwan video files loo isticmaali. Waayo, kanu, Converter ah MSWMM awood leh oo si sahlan loo isticmaalo aan laga maarmi karin. Halkan, waxaan soo bandhigo sida MSWMM video Converter weyn, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waa in loogu badalo MSWMM in ku dhawaad ​​qaab video sida AVI, MP4, wmv, MOV, MKV, iyo wixii la mid kasta oo awood. Hoos waxaa ku Hanuuniye tallaabo-tallaabo.
1 files Save MSWMM sida video files
Riix menu File ee bidixda xagga kore ee interface weyn ee Windows Movie Kan sameeyey ayaa, oo taga si ay "Mashruucan Open". Markaas, a File Open suuqa kala arbushin doonaa. Hadda, waxaad eegi kartaa in files MSWMM aad rabto iyo iyaga soo dhoofsadaan. Ka dib markii in, jiidi mid ka mid ah laga keeno files MSWMM in Storyboard hoose. Ugu dambeyntii, tag "Finish Movie"> "Save si aan computer" inay u dhoofiyaan file a video wmv.
2 Import video files si Converter MSWMM this
Open Wondershare Video Converter, ee dhinaca kore ee bidix ee taas, kaliya aad si fudud u riix badhanka in aad ku darto files wmv aad badbaadisay in tallaabada 1. Ka dib markii in, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha ku qoran Murayaad diinta this app ee. q
3 Dooro qaab wax soo saarka ah
Fur saarka liiska hoos-hoos qaab ama guji image qaabka guddiga Qaabka Output ah. Waxaad ka arki kartaa wax soo saarka qaab daaqadan app ee sida soo socota.
Ku dhowaad dhammaan video & audio qaabab, xataa qalabka caanka ah ee ku jira liiska qaab ay. Just si xor ah u doortaan waxa aad rabto in aad sida qaab wax soo saarka.
4 Beddelaan files MSWMM
Hadda, waxaad uun ku dhufatey "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa tani ay Converter video 's interface ugu weyn ee ay u bilaabaan diinta files MSWMM aad. Halka A ka dib, diinta video la soo dhameyn doono. Si toos ah guji ikhtiyaarka Folder Open si aad u ogaato faylasha la gediyay qaab beddelidda kadib.
Under caawimo ah ee la soo Converter MSWMM weyn, waxaad ka ciyaari kartaa in aad files mashruuca MSWMM meel kasta oo aad rabto.
Sida loo Beddelaan MSWMM Faylal ay si wmv / AVI / MKV / MP4 / MOV, ECT
Sida loo Beddelaan MSWMM Faylal ay si AVI
Sida loo Beddelaan MSWMM Faylal ay si MP4
VirtualDub u Mac: Si fudud Edit Video ku Mac
Sida loo gaabin clip Video ah
DVR-MS Editor: Sida loo Edit DVR-MS Files fudud oo degdeg badan
Sida loo Beddelaan MKV in 3GP
Easy in la isticmaalo ka dib Dhibaatooyinka Alternative for Windows / Mac
Sida loo Edit wmv Faylal ay la wmv Tifaftiraha Mac / Windows